ကြိုတင်ငွေများထုတ်ပေးခြင်း၊ ပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ရုံးနှင့်ပတ်သက် သောငွေကြေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရမည်။
Cash Book ရေးသွင်းခြင်းနှင့်တစ်နေ့တာငွေအ၀င်၊အထွက်စာရင်းများကို Finance သို့နေ့စဉ်စာရင်းရှင်းရမည်။
အသက်(၂၅)နှစ် မှ (၃၀)နှစ်အတွင်းရှိသူ
LCCI Level (1,2) ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
Computer Microsoft Office အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Job code: ee0d6c58f0
Address: Kamayut - Yangon - Myanmar.
As the only and exclusive Kaplan Certified Education Provider program in Myanmar, STARFISH Education offers the world's premier test preparation courses for the IELTS®, TOEFL®, SAT®, ACT®, GMAT® and GRE® exams.
Classroom-based test prep courses which utilize proven Kaplan methods and strategies Extensive online study resources with many hours of additional content High-quality realistic practice tests
Number of employee: 50-70